Sales Shark _9Days Program - Better Version
March 26, 2022 2022-05-17 13:24
မှန်းထားသလောက် မရောင်းရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ‼️
အရောင်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ “ဂျွတ်စကီး” ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကို – Sales Shark လို့ ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီ ၉ ရက်တာ အရောင်း သင်တန်း (The Sales Shark –9Days Program) က သင်နဲ့ သင့်တော့်ပါ့မလားတော့ မသိဘူး ဒါပေမယ့်…
◾️ Freelancer ၊
◾️ အရောင်းပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားတဲ့ အရောင်းသမားတွေ၊ အရောင်းကြီးကြပ်တွေ နဲ့
◾️ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတဲ့ လူ
◾️ အရောင်းအဝယ်နဲ့ မကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် ဆိုရင် ဆက်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
– မျှော်မှန်းသလောက် မရောင်းရဘူး..
– ဝယ်သူတွေကို ဘယ်ကစရှာရမှန်း မသိဘူး…
– ကိုယ့်ရောင်းကုန်ကို အပြောင်မြောက်ဆုံးဖြစ်အောင် မတင်ဆက်တတ်သေးဘူး…
– Quality ကောင်းရဲ့သားနဲ့ မရောင်းရဘူး ဖြစ်နေတယ်…
– ဝယ်သူတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ အစရှာမရဘူး
– ရာထူးတိုးဖို့၊ ကိုယ့် Sales Team က လူတွေထဲ ပိုဝင်ဆံ့ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်
– မယူသေးဘူး၊ မဝယ်သေးဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်
– ပြသနာရှာတဲ့ ဝယ်သူတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတယ်
– အလုပ်သွားဖို့တောင် စိတ်ခွန်အားမဖြစ်တဲ့ နေ့တွေများနေတယ် ဆိုရင်…
The Sales Shark –9Days Program ( ၉ ရက်တာ အရောင်းသင်တန်းက) သင့်အတွက်ဖြစ်မှာပါ။
✅ အရောင်းနည်းစနစ်တွေကို အခြေခံကျကျ နားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်။
✅ ဝယ်သူတွေကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ အရင်ထက် နှစ်ဆ လွယ်ကူလာမယ်။
✅ ကိုယ့်ရောင်းကုန်ကို ရင်ထဲရောက်အောင် ပြောဆို တင်ဆက်လာနိုင်ပါမယ်။
✅ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ (Selling Psychology) တွေနားလည်ပြီး လက်တွေ့ အသုံးချလာနိုင်မယ်။
✅ အရောင်းတိုင်းမှာ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ မယူသေးဘူး။ မဝယ်သေးဘူး ဆိုတဲ့ ပြသနာတွေကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်လာနိုင်မယ်။
✅ ကိုယ့်အရောင်းအတွက် အချက်အလက်ကို အခြေပြုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပိုချလာနိုင်မယ်။
✅ သေချာတာကတော့ အရောင်းပိုင်း နည်းစနစ်တွေကို အရင်ကထက်ပိုနားလည်တတ်ကျွမ်းလာတဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ ရောင်းအားတွေ ရလာနိုင်မှာပါ။
ဒီ ၉ ရက်တာ ကာလအတွင်းမှာ ဘာတွေ သင်ကြားသွားမလဲဆိုရင် 📌
Day 1: Selling foundations of the Sales Sharks
Day 2: Finding Customers Who
Day 3: Preparation and Approaches
Day 4: Delivering Presentation That Sells | Better Than Your Competitors
Day 5: Sales Psychology 101
Day 6: Handing Objections and Sales Closing
Day 7: Establishing Relationship with Customers
Day 8: Managing Data and Sales Analytics for Better Decision
Day 9: Experiences of The Sales Sharks
MSc (Marketing), Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Scotland
Chief Trainer, Better Version
Founder/CEO, Pro Niti Co., Ltd
Winner Of Myanmar Young Entrepreneur 2018
Instruction & Suggestion
How We Create This Course For You
Sales Shark _ Resources
Sales Shark _ Worksheet
Sales Shark _ Presentation
Course Introduction Day 1: Selling Foundation of the Sales Sharks
အရောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားရမယ့် ဉပဒေသတွေ၊ စနစ်တွေ
Role of the sales in an organization
What is selling or sales?
Jobs of The Salesman and3Trust To Build
Sales Principles and Ethics
Common Mistakes Of the salesman
Types of Salesman Position
KAS of the Sales Shark
Day 2: Finding Customers and Prospecting
ဝယ်သူများ၊ ဖောက်သည်များ ရှာဖွေခြင်း
Who is your customers? – Customer Persona
Top5Prospecting Methods
14 Best Practices for Prospecting
Day 3: Preparation and Data Format
ဝယ်သူတွေကို ချဉ်းကပ်ခြင်း နည်းလမ်းများ
The Sales Shark Mission
Choice Criteria and Competitor Analysis
Sales Data Collection & Formatting
Day 4: Delivering Presentation That Sells / Better Than Your Competitors
ဝယ်သူတွေကို ဟက်ထိအောင် ဘယ်လိုတင်ဆက်ပြောဆိုရမလဲ
How People Pay Attentions (How our brain pay attention)
Effective Communication Structure &6Effective Message Blocks
2 Skills To Master As The Sales Sharks
Day 5: Selling Psychology
Selling Magic Words – “I’m not sure”
Selling Magic Words – “Don’t Worry”
Selling Magic Word – “When will beagood time”
Selling Magic Word – “Most People”
Selling Magic Word – “The Good News”
Selling Magic Word – “What happen next”
Selling Magic Word – “What Makes You Say That”
Selling Magic Word – “Before you Make your mind up”
Selling Magic Word – “If I Can, Will You?”
Selling Magic Word – “Just One More Thing”
Task for Day 5
Day 6: Overcoming Objections and Sales Closing Techniques
ငြင်းဆန်မှု့များကို ကျော်လွှာခြင်းနှင့် အရောင်းပိတ်ခြင်း၊ သဘောတူညီမှု့ရယူခြင်း နည်းလမ်းများ
Why we get rejected?
Handling Objections Techniques
2 Ways To Increase Revenues
ဝယ်သူတွေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ခြင်း
Understanding Customer Values and Equity
Day 8: Managing Data For Better Decision Making
အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့နှင့် အချက်အလက်တွေ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့
Creating Reports with Google Sheet and Google Data Studio
အရောင်းပိုင်းမှာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရတဲ့ သူများရဲ့ အတွေ့အကြုံများ
Bonus: Online Selling Tips
Zoom Q & A Session
Price	90,000K	65,000K